IConifers Guest Suite (ibandakanya isidlo sakusasa) - I-Airbnb
IConifers Guest Suite (ibandakanya isidlo sakusasa)
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguMarion
Ekungeneni kwiiConifers, iindwendwe zikhokelelwa kwizitepsi ezijikelezayo ukuya kwigumbi elizimeleyo, zivumela ubumfihlo obukhethekileyo. I-suite inegumbi lokuhlala eline-TV kunye ne-DVD player, iti kunye nezixhobo zokwenza ikofu, kunye nemibono emihle kwi-Clyde Valley. Igumbi lokulala elineebhedi ezimbini liza nelinen yokulala, iitawuli kunye neengubo zokuthuthuzela kwakho. I-en-suite inendawo enkulu ebiyelweyo yeshawari enezindlu zangasese zoncedo. Indawo yokupaka yasimahla iyafumaneka kwisiza kwaye iyakwazi ukuhamba kuzo zonke izinto eziluncedo
**zonke iireyithi ziquka isidlo sakusasa**
4.99 · Izimvo eziyi-120
IConifers ibekwe ngokugqibeleleyo phakathi kweSitrato esiPhakamileyo saseLanark kunye neNew Lanark World Heritage site enika iimbono ezintle ukusuka kwiNdwendwe yeeNdwendwe ngapha kweClyde Valley.
Iindwendwe ziyakwazi ukufikelela kuzo zonke iindawo zokutyela zasekhaya kunye nezinto eziluncedo ngaphakathi kobude bemizuzu eyi-10 yokuhamba. ILanark inokhetho olubanzi lweendawo zokutyela, iikhefi kunye neebhari zokundwendwela iindwendwe.
INew Lanark kukuhamba imizuzu eli-10, kwaye iindwendwe zinokuhamba ngokulula ukuya kwiiFalls zaseClyde kunye neZiko leeNdwendwe eNtsha leLanark kunye nezinto ezinomtsalane ezinxulumeneyo.
UMarion noJames baya kufumaneka ngokobuqu okanye ngomnxeba ngemibuzo ngexesha lokuhlala kwakho.